Zvinoshamisa 83% yeMakambani Anorova neCyber ​​​​Security Breaches
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Zvinoshamisa 83% yeMakambani Anorova neCyber ​​​​Security Breaches
6 min kuverenga
Chidzidzo chitsva cheSkybox Security chakawana kuti 83% yemasangano akatambura tekinoroji yekushandisa (OT) cybersecurity kutyora mumwedzi makumi matatu nematanhatu yapfuura. Tsvagiridzo iyi yakafumurawo kuti masangano haakoshese njodzi yecyberattack, ne36% yeCIOs neCISOs "vane chivimbo chakanyanya" masangano avo haazotambure nekutyorwa kweOT mugore rinotevera.
“Haasi mabhizinesi chete anovimba neOT, veruzhinji pazere vanovimba nehunyanzvi uhu hwemabasa akakosha anosanganisira simba nemvura. Nehurombo, ma cybercriminals vese vanonyatsoziva kuti yakakosha kuchengetedzwa kwezvivakwa kazhinji haina kusimba. Nekuda kweizvozvo, vanotyisidzira vanotenda kuti kurwiswa kwerudzikinuro paOT kunogona kubhadhara zvakanyanya, "akadaro Skybox Security CEO uye Muvambi Gidi Cohen. "Sezvinoita uipi hunobudirira mukusakendenga, kurwiswa kwerensomware kuchaenderera mberi nekushandisa kusagadzikana kweOT chero kusaita kuchienderera mberi."
Tsvagiridzo nyowani, Operational tekinoroji cybersecurity njodzi yakadzikisirwa zvakanyanya, inofumura hondo yekukwira iyo OT kuchengetedza yakatarisana - inosanganisira kuomarara kwetiweki, silos inoshanda, njodzi yekugovera ketani, uye sarudzo shoma dzekugadzirisa kusazvibata. Vanotyisidzira vanotora mukana wekusasimba kweOT nenzira dzisingangoise makambani ega - asi kutyisidzira hutano hweveruzhinji, kuchengetedzwa, uye hupfumi.
Zvikamu zvakakosha zvechidzidzo che2021 zvinosanganisira:
• Masangano haakoshesi njodzi yecyberattack Makumi mashanu nematanhatu kubva muzana evose vakapindura "vaine chivimbo chakanyanya" sangano ravo harizosangana nekutyorwa kwetestamende yekare mugore rinotevera. Asi, 83% vakatiwo vanga vaine kamwechete kutyora kuchengetedza kweOT mumwedzi makumi matatu nematanhatu yapfuura. Pasinei nekutsoropodza kwezvivakwa izvi, maitiro ekuchengetedza aripo kazhinji haana simba kana kuti haapo.
• CISO inobvisa pakati pemaonero nezvokwadi Zvikamu makumi manomwe nezvitatu kubva muzana zveCIO neCISO vane chivimbo chikuru chekuchengetedzwa kweOT hachizotyorwa mugore rinotevera. Kuenzaniswa ne37% chete yevatungamiriri vezvidyarwa, vane zvimwe zviitiko zvekuona nekudzokororwa kwekurwiswa. Nepo vamwe vachiramba kutenda masisitimu avo eOT ari panjodzi, vamwe vanoti kutyora kunotevera kuri pakona.
• Kuteerera hakuna kuenzana nekuchengetedzwa Kusvika pari zvino, mitemo yekutevedzera yaratidza kuti haina kukwana mukudzivirira njodzi. Kuchengeta kutevedza mirau uye zvinodiwa ndiyo yaive yakanyanya kunyanya kunetseka kune vese vakapindura. Regulatory kutevedzera zvinodiwa zvicharamba zvichiwedzera muchiedza chechangobva kuitika kurwiswa kwezvivakwa zvakakosha.
• Kuomarara kunowedzera njodzi yekuchengetedzwa Makumi manomwe nesere muzana akati kuomarara nekuda kwehunyanzvi hwevatengesi vakawanda idambudziko mukuchengetedza nharaunda yavo yeOT. Pamusoro pezvo, 39% yevose vakapindura vakati chipingamupinyi chepamusoro chekuvandudza zvirongwa zvekuchengetedza sarudzo dzinoitwa muzvikamu zvebhizinesi rega pasina tarisiro yepakati.
• Cyber ​​liability insurance inoonekwa seyakakwana nevamwe makumi matatu neina kubva muzana yevakabvunzwa vakati inishuwarenzi yecyber liability inoonekwa semhinduro yakakwana. Nekudaro, inishuwarenzi yecyber liability haivharidzire "bhizinesi rakarasika" rinodhura rinobva mukurwiswa kwerudzikinuro, inova imwe yezvitatu zvinonetsa zvevakapindura ongororo.
• Kuratidzwa uye kuongorora nzira ndizvo zvinonyanya kukoshesa cybersecurity Makumi neshanu kubva muzana eCISOs nemaCIO anoti kusakwanisa kuita ongororo yenzira munzvimbo yese kuti vanzwisise kuratidzwa chaiko ndechimwe chezvitatu zvekuchengetedza kwavo. Kupfuurirazve, maCISO nemaCIO akati zvivakwa zvakapatsanurwa munzvimbo dzese dzeOT neIT (48%) uye kusanganiswa kweIT tekinoroji (40%) mbiri dzenjodzi dzavo dzepamusoro nhatu dzekuchengetedza.
• Silos dzinoshanda dzinotungamira kukugadzirisa maburi uye kuoma kwehunyanzvi hwehunyanzvi hweCIO, CISO, Architects, Engineers, uye Plant Managers ese anonyora masilos anoshanda pakati pezvinetso zvavo zvepamusoro mukuchengetedza zvivakwa zveOT. Kugadzirisa OT kuchengetedza mutambo wechikwata. Kana nhengo dzechikwata dzichishandisa mabhuku ekutamba akasiyana, kashoma kuhwina pamwechete.
• Supply chain uye wechitatu-party ngozi inotyisa zvikuru Makumi mana kubva muzana evakabvunzwa vakati supply chain/third-party kuwana kune network ndeimwe yepamusoro-soro njodzi dzekuchengetedza. Asi, 46% chete vakataura sangano ravo segwaro rechitatu rekuwana iro rinoshanda kuOT.
• Navistar, Inc., Information Security Manager Robert Lynch: “Mamwe maCISO anogona kuva nechivimbo chemanyepo nekuti kunyangwe akatotyorwa, haasati azviona; dzimwe nguva hackers varipo kwenguva yakareba vachisimbisa nzvimbo yavo. Zvine ngozi kuva nechivimbo sezvo vanhu vakaipa vakanaka.”
• Skybox Security Research Lab Threat Intelligence Lead Sivan Nir: “Nzeve dzedu dzekutyisidzira dzinoratidza kuti kusadzivirirwa kutsva muOT kwakakwira 46% maringe nehafu yekutanga ya2020. Zvisinei nekukwira kwekusagadzikana uye kurwiswa kuchangobva kuitika, zvikwata zvakawanda zvekuchengetedza hazviiti kuchengetedzwa kweOT kuve chengetedzo yeOT. kukosha kwekambani. Sei? Chimwe chinoshamisa chakawanikwa ndechekuti vamwe vashandi vechikwata chekuchengetedza vanoramba kuti vari panjodzi asi vachibvuma kutyorwa. Kutenda kuti zvivakwa zvavo zvakachengeteka - kunyangwe humbowo hunopesana - zvakakonzera kusakwana kwekuchengetedza nzira dzeOT. "
Kuti udzidze zvakawanda, dhawunirodha chidzidzo chetsvagurudzo chakazara.
Chidzidzo chetsvagurudzo chaisanganisira mhinduro kubva ku179 OT kuchengetedza sarudzo muUS, UK, Germany, neAustralia. Ruzhinji rwevakapindura (152) vaibva kumakambani ane $1B kana kupfuura mumari mukati mekugadzira, simba, uye maindasitiri ezvekushandisa.
A SKAL Go Getter Hulya Aslantas Akagadzwa seMutevedzeri weMutungamiriri Wenguva pfupi kuDare Repamusoro. January 28, 2022
Embassy dzeEurope: Njodzi yekurwiswa kwehugandanga muKenya January 28, 2022
Vana kubva pavashanu vekuAmerica vanofunga kuti coronavirus ndeyekusingaperi January 28, 2022
Delhi inopedza nguva yekudzoka pakupera kwesvondo sezvo mafungu eOmicron aderera January 28, 2022
Morocco inotangazve ndege dzevatakuri nenyika dzekunze January 28, 2022
Nei Drones Dzichirova Korean Airlines Ndege? January 28, 2022
Seychelles inochema kushaya kweaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Joseph Belmont January 28, 2022
Rwanda - Uganda Border Post Kuvhurwa: Nhau dzakanaka dzekutengeserana nekushanya January 28, 2022
IATA: World Tourism Network Kudzoreredzwa kweAirline Passenger Demand January 28, 2022
Kutanga zvachose chili cheese keg January 28, 2022
Kutanga yakaoma ziso kurapwa ne nanomicellar tekinoroji January 28, 2022
Saiti yeIconic Dirty Dancing Movie Inotambira Munhu ane mukurumbira "Iyo Chaiyo Yakasviba Kutamba" January 28, 2022
Kubudirira Kuberekwazve Kwemakumbo muMatatya Akura uchishandisa Novel Drug Combination January 28, 2022
Luxury Lubricants Yakagadzirwa naChiremba wechikadzi January 28, 2022
Lemonada Media iri paMishini Yekuita Kuti Hupenyu Huve Hushoma January 28, 2022
Ndevapi Vadiki Vakuru Vari Panjodzi YeColorectal Cancer? January 28, 2022
Aimbove Pimp Anodhonza Kumashure Chifukidziro paPsychological Warfare Vatengesi Vanotambisa Vana January 28, 2022
Nzira Itsva Yekuyera Mafambiro Ekufamba muVana Vane Autism January 28, 2022
Zvidzidzo Zvitsva Vanoziva Zvikonzero uye Kurapwa kweRopa Maropa ane chekuita neCOVID-19 January 28, 2022
Kufamba & Kushanya: Hapana Kukoshera Munguva dzeCOVID-19? January 28, 2022
Barbados Inotyora neRoyal Britain: Inotaridzika KuAfrica January 28, 2022
China Airlines inoodha ina Boeing 777 Freighters ina January 28, 2022
United Airlines inovhura zviri pamutemo Flight Academy January 27, 2022
Mushanyi wekuSaudi akaurayiwa nenzou muMurchison Falls National Park yekuUganda January 27, 2022
US inowedzera 'kutyisidzira kwekukandwa kana kurwiswa nedrone' kune UAE yekufamba kuraira January 27, 2022
Zuva Idzva muNassau: Iyo Inofungidzirwa Patsva Sandals Royal Bahamian Inovhurazve Kutevera Multi-Mamirioni Madhora Shanduko. January 27, 2022
European Union inobvumidza piritsi rekutanga reCOVID-19 January 27, 2022
Mazano Anobatsira eKunyora Tsamba Yekukurudzira January 27, 2022
Austria inorerutsa mitemo yakasimba yekuvhara kune vasina kuvharirwa January 27, 2022